Umphakathi awuwuvali umlomo ngesimanga senkonyane | News24
Umphakathi awuwuvali umlomo ngesimanga senkonyane
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE Esithombeni inkonyane ezalwe inkomo uDuntsu inamakhanda amabili nemisila emithathu.
UBAMBE ongezansi umndeni wakwaNdlela nomphakathi wakwaMpumuza e-60s ngenkomo yawo uDuntsu ezale inkonyane enamakhanda amabili nemisila emithathu.
Lesi sehlakalo esingajwayelekile senzeke ngoLwesine ekusen.
UMnu Sbusiso Ndlela ongumnikazi wezinkomo okunguye okube owokuqala ukubona lokhu uchaze lesi sehlo njengomshophi. UNdlela uthi njengokujwayelekile uvuke ekuseni wayobheka izinkomo esibayeni. Uqhube wathi uthe uma ebheka wathola ukuthi uDuntsu akekho kanye nezinye izinkomo esibayeni. Uthe lokho akuzange kumthuse ngoba vele uDuntsu ubengasabi semhlambini owodwa nezinye izinkomo njengoba ubemithi.
“Ngiqhubekile ngayibheka le nkomo nokuthe uma ngiqhubeka nokubheka ngayithola kamakhelwane. Ngithe uma ngisondela kuyona ngathola ukuthi iyafa izinhlungu futhi sekuvele umlenze owodwa wenkonyane leli le nkomo elimithi.
“Nami ngididekile ngibe sengitshela umakhelwane futhi ngimbuza ukuthi ngabe yini engingayenza ukuze ngikwazi ukuyisiza inkomo ngoba ibibonakala ukuthi isezinhlungwini ezinkulu.
“Ube esengiyalela ukuthi angigcobe insipho eyisigaxa i-sunlight bese ngizama ukubuyisela umlenze lo ovelile ngaphakathi ngokuwudusha ubuyele esiswini.
“Nangempela ngikwenzile lokho ngagcoba insipho, ngazama ukuyibuyisela phakathi yagcina ibuyelile.
“Bengibona nokho ukuthi inkomo yami iyafa izinhlungu kodwa ngazama ukubuyisela ngoba ngibona ukuthi izinhlungu zimuka naye uDuntsu.
“Ngokubona ukuthi isimo sezinhlungu siyaqhubeka sigcine simthathile samfaka enqoleni edonsayo salibangisa edolobheni kudokotela wezilwane,” kusho uNdlela. Uqhube wathi bathe uma befika kudokotela wabatshela ukuthi into angakwazi ukuyenza ukuthi ayihlinze kodwa nakho okuzoba imali.
“UDokotela usitshele ukuthi ukumhlinza kuzobiza izinkulungwane ezine (R4 000) bese kuba nenye inkulungwane (R1 000) ngaphezulu. Waphinda waveza ukuthi uma eyihlinza ngeke kube nesiqiniseko sokuthi izoqhubeka iphile, okungenzeka iphile isikhathi esingangesonto nje qha. “Ube esesiluleka ngokuthi okunye esingakwenza ukuthi inkomo lena siyihlinze thina. Ngokubona ukuthi imali ebeyidingakala ayikho ngaleso sikhathi sikhethe ukuthi siyihlinze thina nesigcine sikwenzile,” kubeka uNdlela. Omunye obesemzini wakwaNdlela obesabambe ongezansi mayelana nalokhu, induna yezinsizwa uMnu Moses Mbatha.
Ekhuluma emangele, uMbatha uthe lokhu bayakuqala futhi kubathusile.
“Selokhu ngaba khona emhlabeni kungokukuqala ngqa ngibona into enjena. Isithusile kakhulu le nto siwumphakathi namanje kusafana nenganekwane kithina. Esikwaziyo ukuthi kuye kwenzeke kubantu ukuthi babelethe abantwana abakulesi simo hhayi ezilwaneni.
“Kuyaqala kule ndawo yethu ukuthi kube nenkomo ezala inkonyane elinamakhanda amabili nemisila emithathu. Ukube liphilile inkonyane asazi ukuthi bekuzoba hlobo luni lwenkomo,” kusho induna yezinsizwa.
UNdlela uthe abantu ayazitika ngenyama njengoba uDuntsu begcine bemhlinzile. Uthe inkonyane leli lizolahlwa ngoba nezingane ziyesaba futhi akekho ozimisele ngokudla inyama yalo